Landa i-Spotify Premium APK Mahhala - VidaBytes | I-LifeBytes
Amanethiwekhi Kunethiwekhi | | Aplicaciones
Okwalabo abafuna ukufinyelela kuzo zonke izinhlu zezingoma zeSpotify kodwa mahhala, Sizokhuluma ngezindlela ezithile zokulanda i-Spotify Premium APK mahhala. Ngeke ube nezingqinamba ezinkulu noma umehluko, ngoba uzoba nayo yonke imisebenzi enikezwa yi-Spotify Premium.
Esinye sezixazululo zokuqala ezinikezwayo ukulanda i-Spotify Beta, le yi-APK enikeza ukuphepha yize mahhala ngokuphelele. Ngeke kudingeke ukhansele noma yiliphi inani ekukhiqizweni kwamaculo, ngaphandle kwalapho ufuna ukuwalanda ngoba awunawo umsebenzi wamahhala.
Ngokulanda i-Spotify Apk uzoba nokufinyelela kuhlu lwezingoma ezidlalwe kakhulu nezabiwe, kanye nezingoma zamanje, futhi usebenzise umsakazo ngaphandle kokukhokha izindleko zohlelo lokusebenza. Nakhu ukuthi ungakwenza kanjani:
1 Ungayithola kanjani i-Spotify Premium mahhala?
2 Landa i-Spotify Premium mahhala ngokushintshwa kwe-ID yeselula
3 Landa i-Spotify Premium Mahhala usebenzisa i-Free Trial Surfing
Ungayithola kanjani i-Spotify Premium mahhala?
I-Spotify Beta inguqulo yamahhala efana kakhulu ne-Spotify Premium, futhi ukuyilanda kufanele ufake lezi zixhumanisi ukuze ngokuchofoza kuyo ukwazi ukufaka iSpotify ngokushesha:
Le APK Spotify ikuvumela ukuthi ube nelabhulali yakho, lapho ungahlela khona izingoma nokuqukethwe, kuya ngokuthi yiziphi izintandokazi zakho, futhi ungazakhela nohlu lwakho lokudlalwayo.
Kungukubuyekezwa kwe-Spotify Premium apk yamahhala ebuyekezwe ngokuphelele ngakho-ke kuzoba sengathi ngabe ulande i-Spotify Premium 2019. Kumele futhi ukhumbule ukuthi lawa ma-APK awachazi ikhodi yokulanda ye-Spotify ukuze ukwazi ukudlala izingoma ngokusebenzisa eyodwa isicelo.
Landa i-Spotify Premium mahhala ngokushintshwa kwe-ID yeselula
Uma kwenzeka inketho edlule ingeyona oyithandayo noma ungakwazi ukuyilanda, ungakhetha ukushintsha i-ID yeselula ukuze ulande i-Spotify Premium mahhala. Okokuqala kufanele ulande uhlelo lokusebenza lweSpotify ukuze wenze i-akhawunti sengathi uzosebenzisa insizakalo ekhokhelwayo, ngemuva kwalokho izokunikeza, ngokubhalisa i-akhawunti, ukujabulela isikhathi esincane sokusetshenziswa kwamahhala, noma njengoba kukhombisa., isikhathi sokulingwa kwesicelo.
Kodwa-ke, kufanele unake ukuthi kusukela ngaleso sikhathi uhlelo lokusebenza ligcina i-ID yakho yeselula kwimemori yalo, ngakho-ke wenza i-akhawunti entsha futhi nge-ID efanayo ngeke ukwazi ukukhetha isilingo samahhala seSpotify Premium. Yingakho kunconywa ukuthi njalo uma isevisi yakho yamahhala iphela, wenza ushintsho lwe-ID ye-smartphone.
Ngalokhu kufanele ube ngumsebenzisi oyimpande wefoni ye-Android bese ulanda uhlelo lokusebenza olubizwa nge-Device ID Changer, ungayithola kalula ku-Google Play. Ngemuva kokulanda uhlelo lokusebenza, kufanele ufake bese uchofoza inkinobho ekhombisa igama elithi "Okungahleliwe" futhi ngale ndlela uhlelo lokusebenza luzokukhetha i-ID entsha.
Inqubo elandelayo okufanele uyiqede ukuqala kabusha okujwayelekile kweselula yakho, ukuvula iSpotify Premium futhi bese ubhalisa umsebenzisi omusha, uzobona ukuthi i-ID yakho ngeke ikhunjulwe futhi izokunikeza isilingo samahhala futhi. Le nqubo eyisicefe ngokwengeziwe, kepha isasebenza kahle.
Landa i-Spotify Premium Mahhala usebenzisa i-Free Trial Surfing
Enye inketho etafuleni ukulanda i-Spotify mahhala ngokusebenzisa ithuluzi lamahhala lokuzama ukuhlola. Lokhu kuqhamuka kuhlelo lokuthi Ungakhokhi futhi kukuvumela ukuthi udale i-alias enekhadi lesikweletu cishe futhi mahhala.
Lapho usuthole ama-alias akho kanye nekhadi lakho elibonakalayo ngalolu hlelo lokusebenza, uzokwazi ukufaka leyo datha ku-Spotify Premium futhi uzoba ne-Spotify mahhala isikhathi eside. Akufanele ukhathazeke ngokwenza ubugebengu, ngoba iFree Trial Surfing yesekwa ngamabhange aphesheya.
Okuwukuphela kwento ebabayo kule nketho ukuthi itholakala okwesikhashana kuphela nge-iOS. Uma kudingeka kubasebenzisi be-Android, kufanele wenze enye inqubo "ngokufinyelela kusenesikhathi" kepha ufaka iwebhusayithi esemthethweni ye-Ungakhokhi.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Aplicaciones » Landa i-Spotify Premium APK mahhala
Izinhlobo zamagciwane ekhompuyutha ayingozi ohlelweni
Yini i-IMEI nokuthi uyihlola kanjani kalula?